WAR CUSUB: Dalka Sweden Oo Laga Joojinayo Lacagta La isticmaalo iyo Waxa Lagu Bedeli Rabo | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
WAR CUSUB: Dalka Sweden Oo Laga Joojinayo Lacagta La isticmaalo iyo Waxa Lagu Bedeli Rabo
Warbixin kasoo baxday “World Economic Forum” ayaa lagu sheegay in Sweden ay si tartiibtartiib ah uga sii fogaaneyso adeegsiga lacagaha waraaqaha ah, una wareegayso lacagaha electronic-ga ah ee cards bankiyadu ay bixiyaan iyo tan apps-ka taleefoonnada lagu kaydsado.
Daraasad dhawaan soo baxday ayaa tilmaantay in Sweden ay u sii dhawaanayso in gabi ahaanba ay joojiso lacagaha waraaqaha ah marka la gaaro 2023, iyadoo la filayo in raadka lacagaha waraaquhu uu sii jiri doono sanooyin kooban maadaama aan looga maarmin adeegayada yaryar ee quutul daruuriga ah.
Dowladda Sweden ayaa bilowday iney yareyso adeegsiga lacagaha la daabaco ee waraaqaha ah sanooyinkii lasoo dhaafay, iyadoo khubaradu ay tilmaamayaan inaaney wakhti badan qaadaneyn xilliga ay Sweden gabi ahaanba joojineyso lacagaha waraaqaha ah ee dalkeeda kasoo baxay.
Dadka wax iibsada ayaa si ay tuugada uga dhowrsadaan waxay adeegsadaan lacagaha kaararkooda iyo mobllida ugu jira, halka Bankiyaduna ay kaalin ka ciyaaraan in lacagta warqadaha ah ay gabaabsi ku noqoto guud ahaan dalkaasi.
Waxaa xusid mudan, warbixinta in lagu xusay dalka Shiinaha sidoo kale in lacagtii waraaqaha ahayd ay ku sii dhawaanayso iney gabi ahaaba joogsato, iyadoo ay korortay lacagaha laga isticmaalo mobile-ka sanadkii lasoo dhaafay.